Nzira Yokumhanya Nayo Linux paAzure, Chikamu I: The Basics - ITS Tech School
Nzira Yokumhanya Nayo Linux paAzure, Chikamu I: The Basics
Microsoft yave ichigadzira mazano mashomanana ku Linux uye boka rakasununguka reboka mukati memakore akawanda emakore achangopfuura. Zvose kubva pakushanda SQL Server uye Visual Studio paLinux kuti iite chechokwadi bharuti shell muWindows 10. Zvechokwadi, munaNovember ye2016, Microsoft yakabatana neLinux Foundation seplatinum chikamu. Nehuwandu hweizvi zvingave zvisingaoneki pakutanga, uye kubva pane dzakawanda maonero ekuona zvakanyanya, sero reMicrosoft kuti unzwisise nekugadzirisa zvachose Linux-Microsoft Azure. Ndinoda kugovera chikamu chezvikonzero zvekutanga zvandakachinja kuti ndive mukuru wekushandisa Linux paAzure.
Linux iri pamusoro pemutsara wemutambo muAzure
Pandakatanga kuongorora kubuda kweLinux paAzure, ndakanga ndakagadzirira kutora nzira itsva yekutarisana nekushanda muAzure. Ndakanga ndichishanda pamwe chete (zvakanaka, kazhinji kutamba ne) Kutsiva kubva pakugadziriswa kwaro kutanga. Ndakagadzirisa kubva kunjiniya kusvika panheyo yekutanga uye kunyange kubva kune imwe yakasiyana yeAzure kuti ichinjirwe zviviri. Ndakanga ndakagadzirira kuenda kuLinux paAzure.
Kunobuda, ndinozvinyanyisa. Azure framework yakangobva kuitika-iyo nheyo yayo. Inoshanda zvakafanana kune Linux sezvo ichizadzisa Windows, chaizvoizvo nzira yaunotarisira kuchinja kana firewall kushanda kubhadhara ruremekedzo ruduku kusvika padanho rinoshandisa iyo. Kuti ave akatendeseka, zvaive zvingangove zvisingabatsiri kumeso.
Mumazuva ekupedzisira kwenguva refu nguva iyo Microsoft yakagadziridza matanho anocherechedza kune mazano uye zvinhu zvine chokuita nekuzarura mafambiro apo zvose zvinotaurwa mukuitwa uye Linux zvakananga. Kuvhura chinyorwa hachisati chaonekwa, tinogona kuti, chiedza chakaipa. Microsoft Azure inoratidzika pane izvi zviri pachena uye inonyanya kukosha kweMicrosoft apo kuiswa kweLinux kunooneka.
Chimwe chinhu chinonakidza (chokuti iwe unonzwa pane imwe nheyo yeMicrosoft paAzure) ndechokuti imwe nzvimbo kupfuura 40 yezana yemichina itsva yakagadzirwa muAzure ndeye Linux yakavakirwa. Ndanga ndava kune zvinyorwa zvishoma apo pavanotaura kuti ndiyo huru yemabasa matsva, zvisinei nenzira ipi zvayo yakakura zvikuru. Funga nezvemashure emakore makumi matatu nemasere ekutaura uye kuzarura kuMicrosoft iyo inonyanya kukosha kwebasa idzva pamhepo yavo inonyanya kukosha ichava Linux. Izvozvo zvingava zvinonakidza, asi ini ndakashata.
Microsoft yaenda kunounganidza nguva dzekupedzisira, asi ivo vose vari iko zvino. Kugadzira Linux-based resources muAzure kwakajeka sekuita Windows-based resources. Zvinonyanya kukosha, Linux zvigadziriro zvinosangana uye zvinobatsira muAzure. Microsoft inofanana neyozvino yakabatanidzwa pamwe chete nevashambadzi vashoma vasinganzwisisiki veLinux kuti vape mitungamiri pane zvidzidzo, zvidzidzo uye mapurogiramu. Vatengi, somuenzaniso, Red Hat neDocker vane hurumende dzinogona kuitwa mumaminitsi muAzure. Vhura masimba ekufambisa, semuenzaniso, Redis Cache uye Chef iye zvino inzvimbo yakadzika chikamu chemuganhu weAzure.
Izvo zvese zvakaoma kuita uye kutarisira Linux zvishandiso muAzure
Iko inyanzvi yekugadzira mukati meAzure inogadzira Linux mutambi wakaenzana neWindows. Center cloud cloud inopinda muzvikamu zvitatu zvinokosha: kuchengetedza, kuronga uye kuverenga. Izvo simba uye maitiro ehutano hwekushandisa muAzure ndiOO rationalist, zvinoreva kuti vachashanda nenzira yakafanana kana vari kushanda Windows kana Linux.
Chinhu chikuru chinonyatsoshandiswa ndicho chimiro chekushanda chinoshandiswa pamushandisi we virtual. Zvakanaka izvo uye zviri pachena zvikumbiro zvinoshanda mukati mekushanda kwekushanda.
MuAzure iwe unogona kuita huwandu hwezvimwe zvinoshandiswa usati waita mishonga chaiyo zvino inonyanya kusungirira mishonga yemashandisirwo muzvigadziro zvakakodzera. Iwe unogonawo kuita chikamu chepamusoro chezvinhu zvinoshandiswa pakarepo uchishandisa urongwa hwekugadzirira kana mukova. Nzira yacho yakafanana kana iwe uri kuita Windows resources kana Linux zvidzidzo.
Sezvakataurwa kashoma ini ndiri Windows guy, zvakadaro ndave ndichishandisa mutengi we Linux kuti aite uye atarisire zvinhu zvose muAzure kwechinguva. Parizvino, nokutendeseka ini uye kakawanda ndinoshandisa GUI shell, asi ini ndave ndichishandisa shell yeBash nokuda kwechikamu chikuru chekugadzira kwebasa uye kuchengeta mitambo yakawanda. Microsoft inopa urongwa hwezvigadzirwa zvepamuchinjikwa, somuenzaniso, CLI kana XPLAT CLI pane imwe nguva yaunofanira kuidzivirira, iyo inokubvumira kuti utarisire zvakakwana Azure. Semuenzaniso, kuita mishonga yemhando, iwe ungashandisa:
azure vm make-Q zvinyorwa: ubuntuserver: 14.04.4-LTS: ichangopfuura ...
Chimiro chemuchinjikwa chiridzwa mumutauro wemitauro chiri chakanaka. Ndinonyatsoziva kuti shanduro yekugadzirisa yemagetsi eCI anowirirana kupfuura PowerShell device (iyo ndiyo inokosha inowanikwa mitsara yemagetsi yehutachiona hweWindows).
Kune zvakawanda zvinoshamisa zvinokurudzira kushandisa Linux paAzure. Tsvaga chikamu chechipiri chinyorwa ichi pandichataura nezvekuyananisa, kukanganisa, kuchengeteka, uye dev-maitiro. Zvidzidzo zviviri zviduku, zvisingabatsiri zvinokupa ruzivo rwakakosha kusimuka nekumhanya neLuxux paAzure ikozvino inowanikwa.
15 Top Paying Certifications mu 2017
Zuva Rokuchengetedza Munyika - Iye zvino Inguva Yaro Yokutora Pledge